FAQ - KOOLPON
1. KOOLPON ဆိုတာဘာလဲ?
စားသောက်ဆိုင်၊ Beauty Salon၊ ဟိုတယ်၊ သင်တန်းများနှင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပုံမှန်ဈေးထက်သက်သာသည့် လျော့ဈေးဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ကူပွန်များကို ရယူနိင်သည့် Application တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
2. Discount Coupon (လျော့ဈေးကူပွန်) ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကုန်ပစ္စည်း(သို့) ၀န်ဆောင်မှူအတွက် ပုံမှန်ပေးရမည့် ကျသင့်ငွေထက် လျော့ဈေးဖြင့် ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ အထောက်အထားတစ်ခုကို Discount Coupon (လျှော့ဈေးကူပွန်) ဟုခေါ်ပါတယ်။
3. Discount Coupon တွေက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ?
ယခင် စာရွက်ဖြတ်ပိုင်း၊ ကဒ် တို့အစား ယနေ့ IT ခေတ်တွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် Coupon Code ကို အလွယ်တကူယူလို့ရတဲ့ Website၊ Mobile Application တွေမှတစ်ဆင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သုံး ကူပွန်ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။
4. Discount Coupon တွေကို ဘယ်သူတွေက ဘာကြောင့်ပေးလဲ?
စားသောက်ဆိုင်၊ Beauty Salon၊ ဟိုတယ်၊ သင်တန်းများနှင့် အခြားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက မတူညီသော ကြောငြာ Channel များမှ လက်ရှိ Customer များအပြင် အသစ်အသစ်သော Customer များ ရရှိရန်နှင့် ရောင်းအားတက်စေရန် လက်ဆောင်၊ လျှော့ဈေးပရိုမိုးရှင်းတွေကို ကူပွန်တွေအနေဖြင့် ပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်။
5. KOOLPON Application ကို ဘယ်လိုရယူရမလဲ?
Computer ဖြင့်အသုံးပြုလိုလျှင် https://www.koolpon.com.mm တွင်လည်းကောင်း၊ Android အတွက် Google Play Store နှင့်၊ IOS အတွက် iTunes App Store တွင် အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး Register ပြုလုပ်ကာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
6. KOOLPOL Mobile Application ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူလျှင် အင်တာနက်ခ မည်မျှကုန်မလဲ?
အင်တာနက် ပျမ်းမျှ (1MB) ကို6ကျပ် ဖြင့်တွက်လျှင်
IOS => 27.3MB ✗6= 163.8 Kyats ကျပ်သာ ကုန်ကျပါမည်။
7. KOOLPON ကနေ လျှော့ဈေးကူပွန်ကုဒ်တွေ ဘယ်လိုယူရမလဲ?
ဦးစွာ KOOLPON Application ကို ထည့်သွင်း၍ User Register (ဖုန်းနံပါတ်(သို့) အီးမေးလ်(သို့) Facebook Login) ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။
မိမိစိတ်ဝင်စားသော ကူပွန်ကိုနှိပ်၍ လျှော့ဈေးနှင့် ပတ်သတ်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်၊ စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ပါ။
ကူပွန်ကုဒ်ရယူလိုလျှင် “ကူပွန်ရယူမည်” ကို နှိပ်၍ ကူပွန်ကုဒ်ရရှိကြောင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
8. KOOLPON မှ ရယူထားသော လျှော့ဈေးကူပွန်ကုဒ်(Discount Coupon) တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ?
ဦးစွာ မိမိအလိုရှိသည့် ကူပွန်ကုဒ်ကို ရယူပါ။
ဆိုင်တွင် ငွေမရှင်းမီ KOOLPON မှ Discount Coupon (လျော့ဈေးကူပွန်) ဖြင့် ရှင်းမည်ဟု ဦးစွာအသိပေးပါ။
ထို့နောက် ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့် Menu Icon ထဲရှိ My Coupon ကိုနှိပ်ပါ။
မိမိရယူထားသော လျော့ဈေး (သို့မဟုတ်) လက်ဆောင် ကူပွန်ကုဒ်ကိုပြခြင်းဖြင့် Discount များကို ခံစားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
9. Point System ဆိုတာဘာလဲ?
KOOLPON ကို အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ KOOLPON Application အသုံးပြုမှုမှ ပြန်လည်ရရှိသည့် Loyalty Point တွေအပြင် နှစ်သက်ရာ Online Payment ဖြင့် Points တွေကိုလွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး KOOLPON တွင် တင်ထားသော Discount များ၊ လက်ဆောင်များကို လဲလှယ် ယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
10. KOOLPON မှ Point ရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းတွေက?
Online Payment ဖြင့် Point များ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း
User Registration လုပ်ခြင်း (သို့) Facebook Login လုပ်ခြင်း
Profile Information များ ဖြည့်ခြင်း
Friend များကို KOOLPON Application သုံးရန် Invite ပြုလုပ်ခြင်း
KOOLPON မှ Discount Coupon ကို ဆိုင်တွင်အသုံးပြုပြီး Redeem လုပ်ခြင်း
11. Point တွေကို ဘယ်လို Online payment ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သလဲ?
Online Payment နည်းလမ်း (၃)မျိုးဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
MPU Payment : E-Commerce လျှောက်ထားသော MPU Card များ
Counter Payment : MPU Card မရှိသူများအတွက် မိမိရွေးချယ်ထားသည့် (ABC, g&g Store) စသည့် နီးစပ်ရာ Convince Stores များတွင် ဘောင်ချာ Slip ပြ၍ငွေပေးချေခြင်း
Bank Counter Payment: မိမိရွေးချယ်ထားသည့် နီးစပ်ရာ ဘဏ်တွင် ဘောင်ချာ Slip ပြ၍ငွေပေးချေခြင်း
12. Point တွေကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးရမလဲ?
KOOLPON မှ Exchange Points ထဲရှိ နှစ်သက်ရာ Discounts များကို မိမိမှာရှိသည့် Point ဖြင့် လဲလှယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Exchange Points ရဲ့ တန်ဖိုးအနည်းအများအပေါ်မူတည်ပြီး လဲလှယ်ရမည့်Point တန်ဖိုး အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
13. Discount Coupon တွေကို လက်ဆောင်အဖြစ် တစ်ခြားသူသို့ ပြန်လည်ပေးနိုင်သလား?
ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ရသူသည် KOOLPON တွင် Register လုပ်ထားပါက လက်ဆောင်ရထားသော Coupon ကို “My Coupon” Menu တွင် သွားရောက်ပြီး ရယူကာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
14. လက်ကျန် Point တွေနင့် သုံးခဲ့တဲ့ Point ပမာဏကို ဘယ်မှာစစ်ဆေးနိုင်သလဲ?
ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့် Menu Icon ထဲရှိ My Points History ထဲတွင် မိမိတွင်ရှိသော Point အရေအတွက်နှင့် သုံးခဲ့သည့် Point ပမာဏ History တွေကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
15. Free Coupons ဆိုတာဘာလဲ?
KOOLPON နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဆိုင်များမှပေးထားသော လျော့ဈေးကူပွန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို Coupon များကို အခမဲ့ Download ရယူကာ ဆိုင်များတွင် အသုံးပြုပြီး Redeem လုပ်ခြင်းဖြင့် Loyalty Point များကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ငွေပေးချေမှုအား MPU (သို့) Visa/Master (သို့) နီးစပ်ရာ Convenience Stores (သို့) Bank Counter Payment (သို့) Direct Cash စသဖြင့် နှစ်သက်ရာ Payment System ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။Point များနှင့်လည်း လဲလှယ်ယူနိုင်ပါတယ်။